China Kraft Akwụkwọ Ewepụghị ala akpa factory na-emepụta | Hong Bang
Plastic nkwakọ akpa
Ewepụghị Bottom Bag
Spout obere akpa
akpa nkpuchi akpa
Akpa ikuku akpa
Akwụkwọ nkwakọ akpa
White Akwụkwọ akpa nke Ewepụghị ala obere akpa
Kraft Akwụkwọ akpa maka Coffee na Tea nkwakọ
Omenala E Bipụtara Plastic Film apụta Printing maka Auto ...
Omenala E Bipụtara Plastic Poly Poly Roll
Kraft Akwụkwọ Ewepụghị ala akpa
Ewepụghị Bottom & Guzosie Bag
Na ijikọta atụmatụ kachasị mma nke Quad Seal na Stand Up Pouch, Akwụkwọ Kraft Flat Bottom Bag (nke a makwaara dị ka Box Pouch) nwere mkpesa dị elu, ebe ọ na-eme ka ma shelf ma oghere dị na katọn dị larịị gusset. Akpa Akpụkpọ ụkwụ na-ekwe ka ihe dị mfe dị elu ma kwekọọ n'ọtụtụ ngwa ahịa, site na nri mmiri, kọfị, na muesli, site na nri anụ ụlọ na ngwaahịa hotikoisho.
Akụkụ nke Kraft Akwụkwọ Ewepụghị Bottom Bag
Lamination siri ike siri ike na-enye ezigbo nkwụsi ike maka ikike iguzo onwe ha zuru oke.
Otutu gussets na-enye ohere itinye akara na oghere imewe.
-Dị yiri igbe na-enye ohere itinye ohere dị elu, ma na shelf ma na mbupu.
Nwere ike ịgụnye ọtụtụ atụmatụ pụrụ iche, ụdị zipa dị iche iche dị otú ahụ, ọpụpụ, ọkwa ọhụụ, ọnụọgụ laser na ihe ndị ọzọ maka ụdị akọrọ dị iche iche, ngwa nju oyi na ngwa nju oyi.
Njirimara nke Akwụkwọ Kraft Ewepụghị Bottom Bag
The Kraft Akwụkwọ ewepụghị ala akpa na-arụpụtara si ọtụtụ n'ígwé nke ihe mgbochi ihe nwere ike nkewa n'ime 3 isi iche iche, nke na-ezukọta na-enye obere akpa na-adịgide adịgide na mgbapu-eguzogide ọgwụ e ji mara. Ndị otu a bụ:
Elu Layer: Enye ohere ebi akwụkwọ nke graphic na-ewere ọnọdụ, na-ebu mgbasa ozi nke na-agwa a ika ozi ma na-arịọ ndị ahịa.
Middle Layer: Mee ihe mgbochi mgbochi iji hụ na ọdịnaya nke obere akpa ahụ ka echedo ma dị ọhụrụ.
Ne Layer: Ihe kachasị mkpa n'etiti atọ ahụ. Nke a oyi akwa na-emekarị FDA mma iji hụ na nri dị mma mgbe na-abịa na kọntaktị na nkwakọ ngwaahịa. Ọ dịkwa ọkụ-akara iji mesie ndị ahịa obi ike na etinyeghị akpa ahụ.
Ihe oriri ndị na-eri nri na-enyekwa ohere ịhazi dị ka zipa, oghere dị elu, akwa akwa na windo iji bulie arụmọrụ ya.
Nchedo na ogo dị elu
ga-abụ ụkpụrụ mbụ anyị. A na-eme ngwaahịa anyị niile site na nri nri nke pụtara na ihe nkiri anyị na-eji, ink na akara nke mmepụta bụ nchekwa 100% maka okenye ọ bụla ọbụlagodi nwatakịrị. Ọzọkwa, anyị siri ike na nke pụtara enweghị nnagide maka ụdị nkwekọrịta ọ bụla na-egosi na nrụpụta siri ike, ikuku ikuku na mbipụta doro anya. Nkwakọ ngwaahịa siri ike na egwuregwu zuru oke na ọchịchọ ndị ahịa ga-abụ ebumnuche anyị.
Chepụta ma hazie
Nke a bụ HONGBANG Packaging. Anyị na-enye dị iche iche nri nkwakọ akpa ngwọta maka mkpa na ngwa dị iche iche. Gwa anyị ihe ị chọrọ ka anyị zute ụdị mkpa gị niile. Anyị na-adịghị ịzụlite ngwaahịa na-agbalị ka ụgbọala gị kwupụta ha; anyị na-ege ntị na mkpa gị na injinịa ọhụrụ nke ga-edozi nsogbu gị nkwakọ ngwaahịa.
Ọrụ na akwụkwọ ikike
Anyị nwere ọkachamara ahịa ọrụ otu zaghachi na-edozi ajụjụ n'ime 24 awa. Okwu ọ bụla ga-enwe onye ọ bụla iji hụ na nhazi, oke, ogo na ụbọchị nnyefe ga-adaba na ihe achọrọ. Anyị hụrụ n'anya ịnye ọrụ kachasị mma ma nye ndị ahịa anyị nkwado kachasị.
Nke gara aga: Ewepụghị Bottom & Guzosie Bag
Osote: Omenala E Bipụtara Plastic Poly Poly Roll
Ikuku Kọlụm Akpa
Kọfị Plastic akpa
Food Plastic akpa
Nkwakọ ngwaahịa Plastic akpa
Plastic akpa Printing
Ewepụghị ala akpa
Okwu: Room 607, ụlọ C, xiangzhigu, 58 NANLIAN Road, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province
Ọganihu mmepe nke kraft akwụkwọ akpa
Indonesia International Mbukota Ngosi
Hong Kong International Printing na mkpọ ...
Copyright - 2021-2023: All Rights echekwabara.